Mpanamboatra sy mpamatsy Encoder Modulator | China Encoder Modulator Factory
Ny drafitra ZJ3542U dia maodely 4K Encoder avo lenta. Izy io dia mampifangaro ny encoding (H.265 / HEVC sy H.264 / AVC), ny multiplexing ary ny modulateur amin'ny tranga 1U mahazatra. Izy io dia manohana fantsom-pifandraisana UHD roa (2.0) fantsom-pifandraisana (redundancy mafana) ho an'ny encoding, ary koa input 2 ASI & 32 IP ho an'ny remux. Mba hanatsarana ny fahaizan'ny fitaterana, dia atambatra ny vokatra 1 mitondra DVB-C / T amin'ny seranana RF iray. Izy io koa dia miaraka amina seranan-tsambo ASI 4 hanehoana ny fitaterana RF sy ny seranan-tsambo IP hamoahana TS amin'ny 1 * MPTS. Endri-javatra ...
Fitaovana fampidirana avo lenta ity izay misy ny encoding, multiplexing, scrambling ary modulate. Manohana ny fidirana 4/8/12 HDMI, fidirana tuner DVB-C iray ary fidirana 128 IP miaraka amin'ny seranan-tsambo Data1 (GE) ary Data2 (FE). Izy io koa dia manohana ny DVB-C RF miaraka amina 4 mifanila mitondra, ary manohana ny seranan-tseranana Data1 (GE) hanohana ny 4 MPTS. Ity fitaovana miasa feno ity dia mahatonga azy io ho an'ny rafitra faran'ny loha CATV kely ary safidy tsara ho an'ny rafitry ny fahitalavitra hotely, rafi-pialamboly amin'ny bara fanatanjahantena, hopitaly, ...
Product Overview ZJ3542H / HA encoder modulator dia fitaovana fampidirana avo lenta izay misy ny encoding, multiplexing, scrambling ary modulation. Izy io dia manohana 8 ka hatramin'ny 24 fidirana CVBS, fidirana tuner DVB-C / T / (T) / ISDBT ary fampidirana 128 IP amin'ny alàlan'ny seranan-tserasera Data1 (GE) ary Data2 (FE). Izy io koa dia manohana ny DVB-C / T RF miaraka amina 4 mifanila aminy, ary manohana ny 4 MPTS avy amin'ny Data1 (GE). Ity fitaovana miasa feno ity dia mahatonga azy io ho an'ny rafitra faran'ny loha CATV kely ary safidy tsara ho an'ny rafitra TV amin'ny hotely ...
ZJ3526SA dia mpanamboatra encoder modulator avo lenta sy mahomby. Izy io dia manana fidirana 16 CVBS miaraka amina MPEG4 AVC / H.264 Video encoding ary 1 DVB-C tuner input ary 8 tsy mpifanila fitaterana vokatra miaraka multiplexing, scrambling ary DVB-C modulate misy. Manohana ny fampiasa 256 IP farafahakeliny sy ny vokatra IP (8MPTS) amin'ny alàlan'ny port Data. ZJ3526SA dia miavaka ihany koa amin'ny ambaratonga avo lenta, avo lenta ary vidiny ambany. Izy io dia tena azo ovaina amin'ny rafitra fandefasana CATV. Endri-javatra lehibe ● 16 ...
ZJ3524 DVB-T SD&HD Encoder & Modulator misy USB
ZJ3524 HD&SD encoder & modulator dia noforonina tamin'ny alàlan'ny elektronika mpanjifa izay mamela ny fidirana am-peo na horonan-tsary amin'ny fizarana fahitalavitra miaraka amin'ny fampiharana amin'ny fialamboly an-trano, fanaraha-maso fanaraha-maso, hotely Digital Signage, fivarotana sns. Ny encoding AVC / H.264 sy ny modulate hanovana ireo signal audio / video ho lasa DVB-T RF dia mivoaka. Ny loharano famantarana dia mety avy amin'ny STB, mpandray zanabolana, fakan-tsarimihetsika fahitalavitra mihidy ary antena sns ...
HDMI DVB-C / DVB-T / ATSC / ISDB-T Encoder & Modulator DVB-C / T / ATSC / ISDB-T RF amin'ny fitaovana iray, Fanovana mavitrika Fanohanana Support CC (Closed Caption), EIA 608 Support LCN Low cost General Famaritana ZJ3522C HD encoder & modulator dia noforonina tamin'ny alàlan'ny elektronika mpanjifa izay mamela ny fidirana am-peo na horonan-tsary amin'ny fizarana TV misy fampiharana amin'ny fialamboly an-trano, fanaraha-maso fanaraha-maso, hotely Digital Signage, fivarotana sns. ary modulat ...